रौतहटमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झडप, डीएसपीसहित ७ प्रहरी घाइते - नेपालबहस
रौतहटमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झडप, डीएसपीसहित ७ प्रहरी घाइते
| ११:५५:१० मा प्रकाशित
२४ जेठ, रौतहट । रौतहटमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउने क्रममा सोमबार राति सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच झडप भएको छ । झडपमा डीएसपीसहित ७ प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीले झडपमा संलग्न तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
झडपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डिएसपी द्वारिका घिमिरेसहित ७ प्रहरी घाइते भएका छन् । गरुडा नगरपालिका ९ को गेडहिगुठी टोलमा निषेधाज्ञाको बेला चर्को लाउडस्पिकर बजाएर जन्ती जान लागेको टोलीलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि झडप भएको हो ।
सुरुमा इलाका प्रहरी गरुडाले दुई सुरक्षाकर्मी पठाएर डिजे बन्द गर्न र भिडभाड नगर्न सम्झाएको थियो । तर स्थानीयले उनीहरूलाई घेराबन्दी गरेपछि डीएसपी द्वारिका घिमिरेसहितको टोली पुगेको थियो ।
आफ्ना सुरक्षाकर्मीको उद्धार गरेर फर्कंदै गरेको टोलीमाथि स्थानीयले ढुंगामुढा प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएकाे छ । झडपमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय दिलीप सहनी, सुनील सहनी र राधा सहनीलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी घिमिरेले बताए । कोरोना संक्रमणका कारण जिल्लामा जेठ २६ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने ३० मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने ४३ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी ४४ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै ४६ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी ४९ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा ५३ मिनेट पहिले
कोरोना महामारीमा नेपाललाई सहयोग गर्न एम्नेष्टी युकेको आग्रह ५ दिन पहिले
नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न बोलायो शनिवार विशेष साधारण सभा २ दिन पहिले
नेप्से परिसूचक ३००० विन्दू नजिक २ हप्ता पहिले
किन सक्रिय हुदैछन् ह्याकारहरू ? साइबर डिफेन्सका लागि सरकारलाई सुझाव १ वर्ष पहिले
सेजुवाल र कुँवरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि ८ महिना पहिले
निजी अस्पताललाई कोरोना बिरामीको उपचार गर्न दिइने, तर शुल्क महंगो ! ११ महिना पहिले
आजदेखि पाँचौँ चरणको उद्धार उडान १० महिना पहिले